Blackbeard iPirate - Edward Teach
Abakwa-Privateers & Pirates: I-Blackbeard - Edward Teach
Blackbeard - Ubomi bokuqala:
Indoda eyaba ngu-Blackbeard ibonakala izalwe okanye ijikeleze iBristol, e-Ngilani malunga ne-1680. Nangona iindawo ezininzi zibonisa ukuba igama lakhe ngu-Edward Teach, ukuchonga okufana ne-Thatch, Tack, kunye ne-Theache kwakusetyenziswe ngexesha lomsebenzi. Kwakhona, uninzi lweengcambu ezisetyenziselwa ukuxhamla ukuba kunokwenzeka ukuba igama le-Blackbeard lingaziwa. Kukholelwa ukuba wafika e-Caribbean njengomkhobi-mthengisi kwiminyaka yokugqibela yekhulu le-17 ngaphambi kokuhlala eJamaica.
Ezinye iimithombo zibonisa ukuba uhamba ngomkhumbi waseBrithani ngexesha leMfazwe ka-Queen Anne (1702-1713).
Blackbeard - Ukujika kwi-Life Pirate:
Emva kokusayinwa kweSivumelwano sase-Utrecht ngo-1713, Fundisa ukufudukela kwindawo yokubamba i-New Providence eBahamas. Kwiminyaka emithathu kamva, kubonakala ukuba uye wajoyina iqela lePirate uBenjamin Hornigold. Ukubonisa ubuchule, Fundisa ngokukhawuleza kufakwe kumyalelo we-sloop. Ekuqaleni kwe-1717, baphumelela ngokuphumelela kwiNew Providence bafake iinqanawa ezininzi. NgoSeptemba, badibana noStede Bonnet. Umnini-mhlaba waphenduka i-pirate, uBonnet ongenamava wayesandul 'ukuxhatshazwa kwintlanzi yeSpeyin. Ukuthetha namanye amaqhinga, wavuma ukuvumela ukuba ufundise umyalelo wakhe, Buyisele .
Ukuhamba ngeenqanawa ezintathu, ama-pirates aqhubeka nokuphumelela awa. Nangona kunjalo, abasebenzi basePigigigold abazange banelisekile ngobunkokeli bakhe kwaye ekupheleni konyaka waqeshwe ukuba athathe umhlalaphantsi.
Ukugxininisa nokubuyisela kunye ne-sloop, Fundisa i-guineaman uFrancis La Concorde ngo-Novemba 28 ukusuka eSt. Vincent. Ukukhupha imithwalo yayo yamakhoboka, wayiguqula ibe yintsika yakhe waza wabiza ngokuba yiNtombikazi ka-Anne Anne . Ukunyuka kwama-32-40 izibhamu, u- Queen Anne's Revenge kungekudala wathatha isenzo njengoko ufundiswa ukuqhubeka nokuthumba iinqanawa.
Ukuthatha i-sloop uMargaret ngoDisemba 5, Fundisa ukukhulula abasebenzi ixesha elifutshane.
Ukubuyela kuStt Kitts, umphathi kaMargaret , uHenry Bostock, uchaze ngokubanjwa kwakhe kwiRhuluneli uWalter Hamilton. Xa wenza ingxelo yakhe, u-Bostock uchazwe njengokuba unentshebe emnyama emnyama. Esi sibonakaliso ngokukhawuleza sanikela i-pirate igama lakhe lesidlaliso esinguBlackbeard. Ngomgudu wokubukeka ukwesaba ngakumbi, Fundisa kamva wamboza intshebe waza wathabatha ukugqoka iimidlalo eziphantsi komtya. Ukuqhubela phambili ukuhamba ngeCaribbean, Fundisa ukuthabatha i-sloop Adventure eBelize ngo-Matshi 1718 eyongezwa kwiinqanawa zakhe ezincinci. Ukufudukela ngasenyakatho kunye nokuthabatha iinqanawa, Fundisa ukudlula eHaana waza wanyuka waya e-Florida.
Blackbeard - I-Blockade yaseCharleston:
Ukufika kwiCharleston, SC ngoMeyi 1718, Fundisa ngempumelelo ichweba. Ukumisa nokuphanga iinqanawa ezilisithoba kwiveki yokuqala, wathatha amabanjwa ambalwa ngaphambi kokuba afune ukuba isixeko sinikezele ngemithi yonyango kubantu bakhe. Iinqununu zedolophu zavuma kwaye zifundisa ukuthumela iqela elwandle. Emva kokulibaziseka, amadoda akhe abuya kunye nempahla. Ukuxhasa isithembiso sakhe, Fundisa ukukhulula amabanjwa akhe kwaye wahamba. Ngethuba eCharleston, Fundisa ukuba iWoodes Rogers ihambe eNgilani kunye neenqwelo ezinkulu kunye nemiyalelo yokutshabalalisa iinqwelo ezivela kwiCaribbean.
Blackbeard - Ixesha elibi eBeaufort:
Ukuhamba ngomkhumbi ngasenyakatho, Fundisa i-Topsail (iBeaufort) Inlet, NC ukuyiyeka nokunyamekela iinqanawa zakhe. Ekungeneni kwe-Inlet, uReine Anne's Revenge washaya isanti kwaye wayonakaliswa kakubi. Xa uzama ukukhulula umkhumbi, i- Adventure nayo yalahleka. Ngesobunxele ngokuphindisela kuphela kunye ne-Spanish sloop efunyenwe, Fundisa ifakwe kwisingeniso. Omnye wabantu bakaBonnet kamva wangqina ukuba ufundise ngokuzithandela u- Queen Anne's Revenge phantsi kwaye abanye bacacise ukuba inkokeli yepirate yayifuna ukunciphisa abasebenzi bakhe ukwenzela ukwandisa isabelo sakhe sokuphanga.
Ngeli thuba, Fundisa kwakhona ufunde ngesibonelelo sokuxolelwa komkhosi kuzo zonke izigwenxa ezazinikezela phambi kukaSeptemba 5, 1718. Nangona elingelwa ukuba wayekhathazekile nje kuphela ekukhuliseni iipirates ngenxa yezobugqwetha ezenziwe ngaphambi koJanuwari 5, 1718 kwaye ngaloo ndlela akayi kuxolela ngenxa yezenzo zakhe kwiCharleston.
Nangona ezininzi iziphathamandla ziza kulukhupha loo miqathango, Fundisa ahlale engathembeki. Ekholelwa ukuba iRhuluneli uCharles Eden yaseNorth Carolina ingathembeka, wathumela uBonnet eBath, kwiNC njengolu vavanyo. Ukufika, iBonnet yayixolelwe ngokufanelekileyo kwaye iceba ukubuyela kwi-Topsail ukuqokelela ukubuyisela ngaphambi kokuhamba ngeSt. Thomas.
Blackbeard - Umhlalaphantsi omfutshane:
Ukufika, iBonnet ifunyenwe ukuba iFunds ihambe kwi-sloop emva kokuphanga nokubuyisela inxalenye yabasebenzi bayo. Ukuhamba ngokukhangela kwi-Teach, uBonnet ubuyele kubuqhetseba kwaye yafunyanwa ngoSeptemba. Emva kokuba usuke kwi-Topsail, Fundisa ngomkhumbi eBath apho wamkela ukuxolelwa ngoJuni 1718. Ukumisa i-sloop yakhe, ebizwa ngokuba yi- Adventure , e-Ocracoke Inlet, wahlala eBath. Nangona bakhuthazwa ukuba bafune ikhomishana yangasese ye-Eden, fundisa kungekudala babuyele ekugqibeleni baze baqhutywe ngaseDelaware Bay. Kamva wathatha iinqanawa ezimbini zaseFransi, wagcina enye waza wabuyela eOcracoke.
Ukufika, watshela i-Eden ukuba wayifumene umkhombe ushiywe elwandle kwaye inkundla ye-Admiralty yaza yaqinisekisa ukufunwa kwebango. Nge- Adventure ehlanganiswe e-Ocracoke, Fundisa umdlalo onguhlobo oluthile lukaCharles Vane oye wasinda kwiinqwelo zaseRogers eCaribbean. Entsha yale ntla nganiso yamatye ngokukhawuleza isasazeka kwiikholoni ezibangela ukwesaba. Ngelixa iPennsylvania ithumela iinqanawa zokubamba, iRhuluneli yaseVirginia, uAlexandro Spotswood, yaxhatshazwa ngokufanayo. Ukubamba uWilliam Howard, owayengumphathi wekota kwi- Queen Anne's Revenge , wathola ulwazi oluphambili malunga nokufundisa okuphi na.
Blackbeard - Ukuma kokugqibela:
Ukukholelwa ukuba ukufundisa ubukho kuloo mmandla kubonise ingxaki, i-Spotswood ixhaswe ngemisebenzi ukuze ithathe ipirate eyaziwayo. Ngoxa abaphathi be-HMS Lyme kunye ne-HMS Pearl bekufuneka bathathe umkhosi kwiBat, uLieutenant Robert Maynard wayeza kuhamba ngomkhumbi waya e-Ocracoke kunye ne-sloops eneempahla ezimbini, uJane no- Ranger . Ngomhla kaNovemba 21, 1718, iMaynard i- Adventure yakha i-Ocracoke Island. Ngentsasa elandelayo, i-sloops yayo yangena kwisiteshi kwaye yabonwa yi-Teach. Ukuza phantsi komlilo ukusuka kwi- Adventure , iRanger yayonakaliswe kakubi kwaye ayizange idlale indima. Nangona ukuqhubela phambili kwemfazwe akuqinisekanga, ngenye indlela i- Adventure yaqhuma.
Ukuvala, iMaynard yafihla ininzi yabasebenzi bayo ngaphantsi ngaphambi kokuza kunye neAventure . Ukunyuka emanzini kunye namadoda akhe, Ufundiswa lusiwe xa amadoda kaMaynard ephuma ngaphantsi. Kwi-melee eyalandela, Fundisa iMaynard esebenzayo kwaye yaphule ikrele legosa laseBrithani. Ukuhlaselwa ngamadoda akwaMaynard, Fundisa ufumene amanxeba amahlanu kunye nokubethelwa ubuncinane amaxesha amabini ngaphambi kokuwa. Ngenxa yokulahlekelwa yinkokeli yabo, ama-pirates aseleyo azinikele ngokukhawuleza. Ukunqunqa intloko Inkokhelo yokufundisa emzimbeni wakhe, iMaynard yalela ukuba imiswe kwiJoseph bowsprit. Elinye iqumrhu lombhobho laphonswa ngaphaya komhlaba. Nangona eyaziwa njengenye yeenqanawa ezesabekayo ukuhamba ngamanzi aseNyakatho Melika naseCaribbean, akukho ziqinisekiso eziqinisekisiweyo zokufundisa ukulimaza okanye ukubulala nabani na abathunjiweyo.
I-National Geographic: i-Blackbeard Lives
Ukubuyisela kukaReine Anne
Abaphambukeli beeNkcazo zeNyaniso malunga nokuPhelelwa koLuntu kunye neLungelo loMfazi
I-Underworld Adventure ye-Aeneas kwi-Aeneid
Indlela Ukushisa Kwemvula Kuye Kuphela Usuku
Imbali yeNkqubo yelizwekazi yaseNapoleon
Umbuzo Wezabafundi Obuyela Ezikolweni
Imbali yoLungiso lwezoLimo
Yintoni eyahlukileyo? Ukwaziswa okufutshane kwi-30 Imifanekiso yeNtetho
Ukunyuka kwee-FAQ: Ngaba ndifanele ndithenge izicathulo zamadwala ezincinci kunezicathulo zam esitalato?
I-Mythology - oothixo noodadekazi